Iindaba - Zonke izityalo, yonke indlela ezantsi
Uninzi lwezityalo ezitsha kule veki, uninzi lwazo lunokuba lutsha kuwe, ke inkcazo encinci inokuba licebo elilungileyo:
Iiapile zenenekazi elibomvu zinenyama emnandi kakhulu enencasa, incasa indikhumbuza ezona apile zivuthiweyo ukhe wazitya kunye nentwana yesiraphu yemephu.
Iiapile zeFuji, ezikwabizwa ngokuba ziiapile ezibomvu, ziirandi ezibomvu ezingqukuva ezibomvu ezimilise okombala wegolide. Zimnandi nje ngeapile elibomvu, elineendonga ezincinci. Siyazithanda ezi jam kunye neebhaka.
Sikhule ii-apile zeGala kwisicelo esiqhubekayo sabangenisi bamazwe aphesheya phesheya. Ezi ziindidi ezincinci zama-apile ezijongeka njengokukhanya kweebhalbhu ezijikelezayo, azinakongezwa, kodwa zininzi incasa. Ngokuqhelekileyo zisetyenziselwa ukwenza izitya ze-saladi zaseCaribbean, umxube okhethiweyo we-apile yomsedare, i-pepper, i-anyanisi kunye negalikhi, esetyenziselwa ukunambitha yonke into esuka kwilayisi kunye neembotyi, kwiinyama, okanye kwimifuno.
Emva kokuhlela zonke i-anyanisi zethu ezigciniweyo, sinamatyala ambalwa amancinci amancinci amancinci amancinci amancinci omntwana, malunga nobukhulu beetswele zeperile. Oku kuya kuba yimisonto egqibeleleyo kwi-skewers yee-kabobs ezigayiweyo, ilahle iphelele kwi-stews, okanye inyibilikiswe nje njengabo bonke abalandeli bethu be-anyanisi.
Kukuhla kwezityalo 'ezothusayo' okwangoku. Sisenenqwaba yegalikhi, ijinja, iiapile ezintsha, kunye namatswele ukuba oko kukhethwayo, zive ukhululekile ukuza kujonga iifoto zethu zefama kwiwebhusayithi yethu, kwaye ulandele ikhonkco elingezantsi www.primeagr.com. [iifoto zasefama zibekwa apha]
Inqaku lokugqibela, kufuneka sikhethe kwaye sipakishe kwangoko kwiintsuku kangangoko kunokwenzeka ukuqinisekisa ukuba imifuno yakho ingena ngaphandle komhlaba omtsha ukugcina umgangatho olungileyo. Kwabo bakhetha ukubeka ii-odolo zangaphambili, ungasinceda ngokufumana iiodolo zakho kwangaphambi kwexesha kunesiqhelo, ke siyayazi into ekufuneka siyifumene. Siyazithanda iintaka zakuqala!
Enkosi njengesiqhelo kwishishini lakho, kwaye ube neveki emnandi!